Beekumsa Archives - Ibsaa Jireenyaa
August 7, 2021 Sammubani 4 comments
Milkaa’innaaf ni dheebottanii? Iccitii milkaa’inaa argachuu barbaadduu? Dhugumatti, akkamitti akka milkaa’an beekun karaa milkaa’innaa keessa deemu jalqabuudha. Kitaabban dhiibbaa (influence) guddaa Turkii keessatti uuman keessaa tokko kitaabni Düşün ve Başar (Yaadaa fi milkaa’inna)” jedhu gara Afaan Oromootti hiikuun gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Alhamdulillah Rabbil aalamiin. Kitaabni kuni tarkaanfi tarkaanfin akkamitti akka milkaa’an namatti akeeka. Namni tarkaanfilee kanniin hordofe hayyama Rabbiitiin ni milkaa’a. Ammaaf kitaaba kana boqonnaa (tarkaanfi 1ffaa) asitti ni dhiyeessina. Guutuu isaa in sha Allah yommuu gabayaa irra oolu isin beeksifna. Tarkaanfi 1ffaa buufachuuf as tuqaa: https://sammubani.com/wp-content/uploads/2021/08/yaadaa-fi-milkaaina.pdf